Inkinga yokuxhumana ye-B52
Umbuzo Inkinga yokuxhumana ye-B52
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1212 by i-coull
Sanibonani nonke.Marcus here.Uzibuza nje ukuthi ngabe ukhona umuntu owake waba nezinkinga ngePhakheji le-Boeing B-52H Conitor FSX & P3D.Kukhombisa lapha kuyahambisana prepar3d I-v4 kodwa eyami ngemuva kokuyifaka ayikhombisanga ziphi izithombe efayilini lokukhetha futhi yaphuka lapho ngizama ukuyilayisha.Hope ukuzwa kusuka komunye kungekudala.
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1215 by rikoooo
Ngithakasele okushoyo, ngibheke leli fayela futhi nakanjani alihambelani Prepar3D I-v4, noma kunjalo, umbhali wesibuyekezo (uDavid Robles) enza sengathi ibukezwa FSX I-NATIVE ne-software ye-MCX kepha ayisiqapheli. Amamodeli namanje avela ku-FS2004. Ngakho-ke, manje sengingasho ukuthi iyahambisana FSX futhi P3D kuze kufike ku-VERSion 3 (hhayi i-4). Ngivuselele ikhasi ukukhombisa iqiniso.
Siyabonga ukuletha le nkinga kimi.
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1216 by i-coull
I-Cheers Erik.Yebo.Kunzima ngezinye izikhathi kuze kube yilapho uzwa kusuka kumuntu othola ukuthi awusebenzi.Ngizokwazisa uma ngibona abanye.